erectile dysfunction pills သည်ဗြိတိသျှနှစ်တစ်ထောင်အတွက်ထိပ်တန်းပါတီဆေးဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကုထုံးဆရာ Raymond Francis, (2017) - Porn ပေါ်တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ကိုကာကိုလာ, MDMA, အမြန်နှုန်း ... Viagra? ပို. ပို. လူငယ်များထဲကညဉ့်တွင်အပန်းဖြေအသုံးပြုမှုအတွက်မှောင်ခိုစျေးကွက်အပေါ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆေးပြားဝယ်ယူနေကြသည်အဖြစ်ယခုဤဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်သည်တွေရဲ့ standard အစေးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဆေးပြားအရေးပါသောဖြစ်လာအဖြစ်မှောင်ခိုစျေးကွက် Viagra ရောင်းအားတစ်ဦးစန်းကိုမြင်ခဲ့ပြီ "ဟုအဆိုပါပါတီများ၏အစိတ်အပိုင်း။ " လူတွေအစားမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ဒါမှမဟုတ်အရက်၏အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းနှင့်အိပ်ရာရှိလူများသင်ျခြိုဆပ်နိုင်ကြောင်းအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများတန်ပြန်ဖို့နည်းနည်းအပြာကူမသောသူမှဖွင့်အဖြစ်က Sky News မှအဆိုအရကင်း, တဦးတည်းအများဆုံး-တဏှာမူးယစ်ဆေးအဖြစ်က၎င်း၏ချုပ်ရာထူးကိုဆုံးရှုံးနေပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးကုန်သည်တွေကိုသူတို့ ပို. ပို. အချို့ရှာနေတက္ကသိုလ်များမှာပိုလတ်ဆတ်ပစ်မှတ်ထားနေကြသည်ဟုပြော "အင်္ကျီကိုလှီး။ " မဟာမန်ချက်စတာကနေမူးယစ်ဆေးကုန်သည်အဆိုအရသူနှင့်အခြား pushers အပြာရောင်ဆေးပြားများ၏ရောင်းရငွေမှ "တစ်ဦးအသတ်ခံရမှုအောင်" နေကြပါတယ်။ ကုန်သည်တွေတစ်ပေါင်သကဲ့သို့အနညျးငယျအဘို့ဆေးပြားကိုဝယ်ခြင်းငှါတတ်နိုင်ကြသည်, ဒါပေမယ့်နိမ့်ဆုံး£5($ 6.60) အဘို့ထိုသူတို့ရောင်းနိုင်, သူက Daily Star ကိုပြောသည်။
"လူအပေါင်းတို့သည်ဤလူငယ်ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အိမ်ကနေအခါပိုလတ်ဆတ်အပတ်က, မျက်မှောက်၌ဘာမှ gging ** ့, ကျွန်တော်တစ်ဦးအသတ်ခံရမှုလုပ်သည့်အခါအချိန်ဖြစ်ပါတယ်" ဖဲဝေသူကဆိုသည်။ အဆိုပါဆေးပြားပင် 99p စတိုးဆိုင်များသူတို့ကိုစုဆောငျးဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ကျယ်ပြန့်ဖြစ်လာကြပြီ, သူတို့အဘို့ဆေးညွှန်းအတိတ် 10 နှစ်အတွင်းသုံးဆပါပြီ။
သူတို့ကယခု 90 ဖမ်းဆီးရမိထားကြောင်းတရားမဝင်ဆေးပြားများ၏£ 17.4 သန်း ($ 23 သန်း) တန်ဖိုးရှိအတူအားလုံးဖမ်းဆီးရမိအတုမူးယစ်ဆေး 2016 ရာခိုင်နှုန်း။ ဒါကတက် 2.5-3.3 အတွက်£ 2012 သန်း ($ 13 သန်း) မှဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်ကျော်ဖမ်းဆီးရမိမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စုစုပေါင်းတန်ဖိုးအားထို့ကြောင့်£ 49.4 သန်း ($ 65.2 သန်း) မှပမာဏသည်။
လိင်စိတ်ပညာရှင် Raymond Francis သည် Harley Street's Apex Practice တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ သူသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၃၅ နှစ်အောက်အသက် ၃၅ နှစ်အောက်များသောသူများနှင့်ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးမရှိကြသည့်ဆေးပြားများကို အသုံးပြု၍ လူနာများတိုးပွားလာသည်ဟုဆိုသည်။
"သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်ကျွန်မဒါကြောင့်ချက်ချင်းရရှိနိုင်သည့်ညစ်ညမ်းမှတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာပုံရိပ်၏ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်အားဖြင့်အချို့သောဒီဂရီမှမောင်းနှင်နေသည်, အပန်းဖြေအကြောင်းပြချက်များအတွက် Viagra အပေါ်သူတို့ရဲ့မှီခိုယုံကြည်" သူက Sky News သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
သူကသူ့လူနာမဆိုဇီဝကမ္မဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များသတင်းပို့မပြုခဲ့ပေမယ့်သူတို့က porn အတွက်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို၏လက်တွေ့သရုပ်ဖော်ရောက်ရှိဖို့သူတို့ရဲ့ရုန်းကန်အတွက်မူးယစ်ဆေးအပေါ်ကိုယ်ထိလက်ရောက်မှီခိုဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း, ထိုပြောဆိုထားသည်။
"ဒါဟာခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်နောက်ဆုံးအနည်းငယ်ကျန်ရှိနေသောမညီကြောင်းများထဲမှယနေ့ပင်ပွင့်လင်းရဲ့ဒီနေ့နှင့်အသက်အရွယ်အတွက်, အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်, တကယ်နက်ရှိုင်းစွာလျှို့ဝှက်စဉ်းစားသောအသက်တာ၌အနည်းငယ်ကိစ္စရပ်များတစ်ခုဖြစ်သည်" Francis ကဆက်ပြောသည်။
ဒန်နီလီက-Frost က, စတင်အာဏာတည်အုပ်စုများအတွက်စစ်ဆင်ရေး၏ဦးခေါင်း, က Sky News သို့ပြောကြားခဲ့သည်: “ သူတို့သိမ်းဆည်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုမှေးမှိန်သွားတယ်။ ငါပထမ ဦး ဆုံးဤအမှုကိုစတင်သောအခါသင်သည်လူတို့အားနှစ်ပတ်တာအားလပ်ရက်အဖြစ်အိန္ဒိယသို့ပျံသန်းပြီးနောက်ခရီးဆောင်သေတ္တာအိတ်များနှင့်အတူပြန်လာကြလိမ့်မည်။ သူတို့၏အဖော်များသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်အနည်းငယ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲထားကြပြီး၎င်းတို့အားလုံးအားသူတို့၏အားလပ်သည့်အိပ်ခန်းများမှရောင်းဝယ်နေကြသည်။
“ ယခုတွင်သင်သည်ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်လာပြီ၊ ရုရှားကဲ့သို့သောနေရာများတွင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ ၀ င်ရောက်လာပြီ၊ ကေမန်ကျွန်းများသို့ထွက်သွားသောငွေများရရှိသည်။ စီးပွားရေး သူကပြောပါတယ်။
16 နိုဝင်ဘာ, 2017